Mogadishu Journal » 2018 » November » 23
Mjournal :-Hanti dhowraha guud ee Qaranka Maxamed Maxamuud Cali (Afgooye) ayaa qoraal jawaab ah ka soo saaray eedeyntii Guddiga Maaliyadda ee Golaha shacabka Baarlamaanka uu u jeediyay Wasaaradda maaliyadda iyo Hey’addaha dowladda inay ku kaceen wax is daba marin, maamul xumo...
Mjournal :-Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo booqasho ku maraya degaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ku eedeeyay in ay doonayso in ay Soomaaliya meelkaste oo ka mid ah ay dabka shido. Muuse Biixi waxaa ku eedeyay Madaxweyne Farmaajo in uu...
Christian Eriksen oo qandaraaskiisa 18-bilood ka harsan oo la ogaaday kooxda uu ku wajahan yahay
Kubad sameeyaha reer Denmark Christian Eriksen qandaraaskiisa uu Tottenham kula jiro waxaa ka harsan 18-bilood mana muuqato rajo ku aadan heshiis cusub inuu saxiixo. Sidaa darteed Spurs ayaa ku qasban marka uu xili cayaareedkan soo idlaado inay Christian Eriksen iska iibiso si...
Wararkii ugu dambeeyay ee doorashadda Madaxweynaha Koonfur Galbeed
Mjournal :-Magaalada Baydhabo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed waxaa saacaddihii lasoo dhaafay ka dhacay kulamo kala duwan oo looga hadlaayo Xaaladda Qabashadda doorashadda Madaxtinimadda maamulka Koonfur Galbeed. Xoghayaha Guddiga doorashadda maamulka Koonfur...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Markale faahfaahin ka bixiyay Isbedallada ka socda Geeska Afrika oo qaar badan oo ka mid ah Bulshadda Soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan u fasirteen. Waxaa uu sheegay Madaxweyne Farmaajo in Soomaaliya ay dani...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gabogabeeyay booqasho rasmi ah oo uu muddo saddex cisho ah ku joogay dalka Talyaaniga. Madaxweynaha ayaa intii uu Rome ku sugnaa waxa uu wada hadallo la yeeshay Ra’iisul...
Mjournal :-Magaalada Baydhabo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed waxaa saacaddihii la soo dhaafay ka dhacay kulamo kala duwan oo looga hadlaayo Xaaladda Qabashadda doorashadda Madaxtinimadda maamulka Koonfur Galbeed. Xoghayaha Guddiga doorashadda maamulka Koonfur...